Qaban-qaabiyeyaasha Shirka Maalgashiga Puntland oo la abaalmariyey
Qaban-qaabiyeyaasha Shirka Maalgashiga Puntland oo la sharfey
GAROWE, Puntland - Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Munaasabad Casho Sharaf ah u sameeyay Guddigii iyo xubnihii kala duwanaa ee ka shaqeeyay qabsoomida Shirkii Maalgashiga Puntland, oo (15-17), September 2019 ku qabsoomay Caasimada Garoowe.
Munaasibada Casho Sharafta ah ee loogu mahadceliyey dadkii ka shaqeeyay qaban qaabinta iyo diyaarinta Shirka, waxaa ku weheliyey Madaxweynaha xubno ka tirsan Goleyaasha kala duwan ee Dowladda Puntland.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Dowladda Federaalka, Qaar ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Dowladda Puntland, Agaasimaha Guud ee Madaxtooyadda Dowladda Puntland, Qurbo joog iyo masuuliyiin kale ayaa kasoo muuqdey.
Madaxweyne Deni ayaa u mahadceliyey Guddigii Dowladdu u xilsaartay qabashada Shirka Maalgashiga Puntland iyo dhammaan dadkii kala shaqeeyay qabsoomida Shirka.
Wuxuu Bogaadiyey doorkii ay qaateen Laamaha Amniga, Warbaahinta, Kooxaha Farsamada, Maamulka Hoteelka Martisoor, Doorkii gabdhuhu qaateen, Shirkadda Tarjumaada Luuqadaha iyo dhammaan cidkastoo si uun uga qeyb qaadatay qabsoomida Shirka.
Ugu danbeyn, Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Shahaadooyin gudoonsiiyey xubno metalaya guddiyadii iyo dadkii kala shaqeeyay qabsoomida Shirka Maalgashiga Puntland.
Shirkaas oo ay kasoo qeybgaleen 400 xubnood oo ka kala socday dowladdo iyo shirkado ayaa waxaa kasoo baxay maalgashi 467 milyan ah, taasi oo guddi loo saarey dabagalkeeda iyo fulinta.
Mudaneyaasha ayaa wasiir Goodax Bare ku eedeeyay "in uu hareer-maray balamo ay dhigteen".
Puntland oo ciribtireysa argagixisada si ay u soo jiidato maalgeshi
Puntland 15.09.2019. 13:55
Puntland 06.08.2019. 16:52